Imisebenzi eDubai yokuQesha ifumaneka eDubai nase Abu Dhabi
Imisebenzi eDubai yokuQesha ifumaneka eDubai nase Abu Dhabi-Imisebenzi ifumaneka eDubai nase Abu Abuabi!
Ukuqeshwa kwakhona eDubai-United Arab Emirates
Imisebenzi yePakistani e-UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Disemba 10, 2017
Imisebenzi e-Dubai Recruitment - Ngoku siyakuthatha
Imisebenzi kuyo dubai yokugaya zokuthengisa. Ngale nto engqondweni, iqela lethu, ukunceda abasebenzi abatsha. Ngokukodwa lowo unamava amnandi. Umzekelo, ukuba ufuna umsebenzi phesheya. Kwaye ukuba iminyaka eliqela yamava. Iqela lethu lokufuna abasebenzi lijonge phambili ekuncedeni. Kwicala elibi, abasebenzi phesheya. Ngubani osenokungabi namava awaneleyo. Isenakho fumana umsebenzi ngomzekelo wecandelo lokhuseleko. Kodwa kuya kuthatha ixesha elingakumbi.
Sinika umsebenzi e-Dubai!
Cofa kumfanekiso ukulayisha i-CV
Umsebenzi okhoyo kwi-Dubai nase-Abu Dhabi!
Imisebenzi e-Dubai Recruitment - Dubai City Inkampani, Siyi ngoku ukuqasha ukuya Dubai !. Njengokuba kunjalo, inkampani yethu inayo imisebenzi ekhoyo kwi-tubai nase-Abu Dhabi. Faka isicelo somsebenzi omtsha kunye ne-CV yakho ehlaziyiweyo namhlanje !. IsiXeko saseDubai kunye no-Abu Dhabi ngokubanzi ngokulandela unyaka wokukhula okukhulu ngezithuba ezininzi zomsebenzi. Ngaphantsi kwezo meko, I-Emirates iqhubile kunye namaxabiso eoyile. Ezi ntsuku ndawo yengingqi ye-GCC sele iqalile ukulawula Imisebenzi emihle kakhulu yokuthengisa kwaye iqalise inkqubo ekhethekileyo yabangaphandle.
Kuhlalutyo lokugqibela, iqela lethu seta ukukhangela umsebenzi inkqubo yozinzo yokunyuka amathuba okufumana umsebenzi kunye namathuba omsebenzi kuwe. Ukunikezelwa kwezi ngongoma, sinenkqubo enomgangatho wokudala imisebenzi emitsha ngamnye ofuna umsebenzi kwi-2018.
Ukuza kuthi ga ngoku, iNkampani yaseDubai City ithatha uvavanyo lwabaqeshi abangaphezu kwe-950 ngaphesheya kwe-United Arab Emirates. Ke umphambili, senze iingcebiso malunga imisebenzi eDaibhi yaseNdiya.
Iinkampani ezininzi Yila indibano kulo nyaka eDubai, kunye neenkampani ezimbalwa ezimangalisayo ezicwangcisa ukusikwa kwemisebenzi.
Umsebenzi wokwakha ngaphakathi kumacandelo oyile kunye negesi ekhula eSharjah I-Dubai, kodwa ngokukhawuleza e-Abu Dhabi.
Iikhompyutha ze-35,000 e Dubai zi ukuqasha imisebenzi yee-portals kunye nee-arhente zokuqesha.
Sinikeza Imisebenzi e-Dubai Ukuqashwa kwamashishini ne-Dubai City Inkampani.
Imisebenzi e-Dubai Recruitment - Inkampani ye-Dubai City
Imisebenzi e Dubai - isikhokelo esipheleleyo sokufumana umsebenzi
Ingqesho e-Dubai yonke into malunga nephupha lomsebenzi ngenye icala ungayifumana.
Nangona oku kunokwenzeka ukuba ufuna ukufumana entsha amathuba omsebenzi kwi-United Arab Emirates. I-Dubai City Inkampani ineendaba ezilungileyo kuwe. Zininzi ezininzi izithuba zemisebenzi esixekweni kwaye azifani. Nangona kunjalo, kwinto enye, imeko yokusebenza kunye nexesha lomsebenzi kunokuba yahluke kakhulu kwilizwe lakho lokuzalwa. Ukubonisa inkqubo yokukhangela umsebenzi e-Dubai kujonga kwinqaku lethu sibhale phantsi yonke into ofuna ukuyifumana indlela yokufumana imisebenzi e-Dubai.
Iindaba ezimnandi ezintsha abafuna umsebenzi eM Dubai nase-Abu Dhabi. Elinye iphuzu eliphambili kubo bonke abazingeli abaqeqeshiweyo abanokwazi kakuhle fumana umsebenzi ohlawulelwayo kakuhle kwi-UAE. Inye into, abantu abasandula ukufika eDubai kwaye yavulekelwa kwimibono emitsha yomsebenzi. Kufuneka wazi ukuba ngowuphi umsebenzi owufunayo ukungena kwi-United Arab Emirates. Apha ngezantsi iqela lethu libonisa iingcebiso ezimbalwa apho unokufumana khona iziza ezilungileyo kwiMbindi Mpuma. Ezi website zenza ukuba ufumane ukucinga ngokutsha kwiindawo ezininzi kwi-Dubai City nase-Abu Dhabi. Imisebenzi e Dubai Ukuqashwa kuyisisiseko sakho kwimpumelelo eMbindi Mpuma.
Fumana umbono okhawulezayo ngowona msebenzisi ubalaseleyo onamava amazibuko emisebenzi kwintengiso yomsebenzi eMbindi Mpuma. Sizama nokuba luncedo kakhulu ekuboneleleni ulwazi oluxabisekileyo ngamnye kumceli womsebenzi. Ngokubanzi, iinjongo zethu kukubonisa ukuba ziphi iinkampani eyona nto ifanelekileyo yokuqashwa kwi-UAE.
Kwicala elingelilo, kukhona indawo ezininzi ezithandwayo zomsebenzi. Abanye babo badume kakhulu, ke uyakuhlala uzifumana ujongene namakhulu abaviwa kwaye uza kuba kwisigxina esikhulu. Kodwa phantsi kwezo meko, ungalokothi ulahlekelwe nguwe umsebenzi wokuzingela kwi-WhatsApp kuba nonke nihamba ngokufanayo ikhondo lomsebenzi kwiDubai City.
Injongo yethu kukubonisa apho ulayishe ulayishe kwakhona fumana imisebenzi ephezulu ehlawulwayo e Dubai. Imisebenzi e-Dubai Ukuqashwa eMiddle East.
I-Job Job Portal Site eDaibha I-UAE kunye neMisebenzi e-Dubai?
Inkampani esemthethweni kwindawo yokufuna umsebenzi
# No.1 INKQUBO EPHAKATHI - Phezulu: I-Job Site UmSebenzi kunye neNkonzo yokuThengwa kwi-UAE.
I-Dubai City Inkampani - Imisebenzi e-Dubai - Winner Inkampani kunye No.1 Umboneleli weKhondo kwi UAE. Sibhala malunga izinto ezenzeka e-UAE.
Indawo yo msebenzi we-Dubai City Company Umdlali oyintloko kwiwebhusayithi yokukhangela imakethi. Ngokuqhelekileyo, abaqashi bethu abaphezulu balapha ekuncedeni abanye abafuna umsebenzi eDairobi. Kuhlalutyo lokugqibela, unokufumana inxaxheba ebaluleke kakhulu kubaqeshi njengomzingeli womsebenzi. Uninzi lwabafunayo kumsebenzi kunye ifuna abafuna umsebenzi bavela eIndiya, Pakistan, kunye ISaudi Arabia. Kwelinye icala, ukukhangela imisebenzi e Dubai yimakethi yamazwe aphesheya kwezilwandle abameli bokuqesha kwaye i amaziko ezixeko ekuqeqesheni abasebenzi, besebenza nokusebenza okusingqongileyo kuMbindi Mpuma.
I-Dubai City Inkampani - Siyi-Legit iwebhusayithi yeMisebenzi e-Dubai
Ngomqondiso ofanayo, iwebhusayithi yethu inikeza Imisebenzi ephezulu yokuhlawula umvuzo e-Dubai. Ngapha koko, sisebenzisa itekhnoloji phambili ukukunceda ukuba uphuphe umsebenzi. I-United Arab Emirates yenye yezona ndawo zithandwayo nezikhangelekayo zamaphupha okuzingela ilizwe labazingeli beMisebenzi yamazwe ngaMazwe kunye nabafuna umsebenzi weYurophu I-Dubai City yindawo ehamba phambili yokuhamba kuyo kwaye abaninzi babo bazalisekisa amava amva nje ukuba bafumane umsebenzi osisiseko kwishishini lokwakha.
Ngenxa yesi sizathu, iqela lethu lelinye engcono ekubekeni abaphathi. Njengo iinkonzo zokuqashwa ngamazwe ngamazwe Iqela lethu libonelela ngamathuba omsebenzi ngakumbi kuwo onke amazwe e-GCC. Umzekelo, ukuba uneganga kwibala lokuthengisa unoku Yiba ngumgqatswa ofanelekileyo kuthi. Ngenxa yeenkonzo zethu zenkampani, sisebenza ikakhulu ne-India, Philippines, Saudi, Qatar, Abazingeli basePakistan. Ngoko ke, ngenxa yoko abafuna umsebenzi ngamnye abafuna umsebenzi wabo wephupha e Dubai. Sinikeza imisebenzi ephezulu e-UAE. Imisebenzi e Dubai Ukuqashwa kunye ne-Dubai City Inkampani kunokwenzeka.
Ukuchitha ixesha lakho kuya kufuneka ngokuqinisekileyo ufake i-Resume yakho kwaye zama ugqibelele ukuLungele ukutshintsha kweNkqubo. Inkampani yaseDubai City ikwabonelela ngeenkonzo zokuqeshwa okumangalisayo kumajelo asekuhlaleni. Kwaye nangaphezulu. Siqeshisa eMumbai nakwizwe.
Imisebenzi e Dubai - Dubai City Inkampani
Thina sisixhobo esiphezulu sokufuna umsebenzi kwi-Dubai City!
Ezinye iinkampani eziphezulu ze-5 - Ukufumana izithuba zemisebenzi e-Dubai City
Amandla aMandla kunye neNdlela yokuPhila - Inkampani yeDubai City
Bayt I-portal ehamba phambili kwi-UAE
Wonke umntu uthetha ngaye indlela yokufumana umsebenzi e-Dubai?. Into yokuqala yokukhumbula iBayt yenye yezona ndawo zithandwa kakhulu Gulf Amazwe amathuba emisebenzi. Ukubonisa le ndawo yomsebenzi ibandakanya iSaudi Arabia, United Arab Emirates, IOman, Yemen, Kuwait, Qatar, kunye neBahrain. Kwaye ungakhetha nakwamanye amazwe ngokunjalo. Izibhengezo ze-Bayt imisebenzi engenakubalwa ibonelela phantse yonke imihla.
Ubuninzi obunobungqina obunyanzelayo ukuba ungomnye walezo zinto zinzima imisebenzi yokuphenya. Ngokubanzi, kuya kufuneka uthumele ukuphinda uqhubeke rhoqo kusasa kubaqeshi abatsha. Ekuqhubekeni, kuya kufuneka wenze njalo ngokuhlwa ngethemba lokubona isikhundla samaphupha akho. Le portal ikalwe kakhulu kwimisebenzi eDubai Indian.
Uninzi lwabantu abafuna umsebenzi thanda i-UAE njengoko inokutshintsha ubomi bakho. Ngenxa yale nto Inkampani yase Dubai kwizithuba zomsebenzi ze-UAE zomsebenzi kwimisebenzi emitsha yonke imini nobusuku. Ke ngoko izithuba zabo ezilungileyo zomsebenzi zisekwe e-UAE. Kwicala elingalunganga ngenxa yokuba inkulu ukuze ubenako fumana amathuba kulo lonke elaseArabia. EMntla Afrika nditsho nePakistan kunye esri Lanka. Kodwa olu hlobo amathuba engqesho akukho lula ukufumana.
Ngokugqithiseleyo - Enye yeyona ndawo ehamba phambili yokusebenzela
Ngaloo portal yomsebenzi, ngokumangalisa unokwakha isakhono sakho somsebenzi. Ukuyibeka enye indlela, ngokukhawuleza wadala iphrofayili engcali iza kukunceda usebenzisa umakhi weCVTalente yeCV. Ngesi sizathu, sebenzisa i-CV yazo nefomathi yobugcisa xa ufuna umsebenzi naphi na. Jonga ezinye zeesampulu zeCV kwiwebhusayithi yabo.
I-Gulf talent yi-portal yokuqashwa kwabasebenzi base-Dubai. Oku Inkampani yase Dubai uluhlu lweenkampani ze-4,000 ezimangalisayo ezivela kwilizwe laseGulf. Nje ngeziphumo abazingeli bemisebenzi kunye nabaqeshwe abaphathi usebenzisa iinkonzo zabo ukufumana italente entsha. Ngamanye amazwi, kukho iindawo ezinkulu zokuqasha apho, kuquka iDaman, ADCB, kunye no-Etisalat.
le Inkampani yokuHamba i Dubai unikeza amathuba okufikelela kwimida yonxweme. Nangona uzakufumana ezininzi amathuba emisebenzi kwiGulf ukuba ukhangela imisebenzi kwi-UAE kuphela. Ngale nto engqondweni, bambalwa abaphathi bezikhundla ezikhoyo onokuthi ufumane kwaye uyeke ukuphupha ngeDubai.
MonsterGulf - I-portal yomsebenzi wamazwe ngamazwe kumazwe aseGCC
I-Monstergulf ilawula isebe lamaqumrhu okuqasha amazwe. I-Monster yindawo yokusebenza yomntu onomdla kakhulu. Ekubeni ungumcebisi omtsha wemisebenzi, imisebenzi ikhona ezininzi zeemoto. Ngamanye amagama, i-monster gulf enceda abaphambukeli kulwakhiwo kunye neebhanki kwizindlu nomhlaba. Oko kukuthi ngalo msebenzi kunye iphepha lewebhu lengqesho kunokwenzeka ukuba ukhangele ingqesho ngomsebenzi, mmandla okanye umzi mveliso. Le ndawo yomsebenzi ikwavumela ukufumaneka kwesicelo esenziwe kwi-intanethi esitsha sokukhuphela i-CV kwindawo yokugcina kwaye inike neengcebiso neengcebiso malunga indlela yokufaka isicelo kwi-Dubai.
Charterhouse - Indawo yokuqashwa kwabafundi e-Dubai City
Le nkonzo isebenza kulo Phakathi empuma, kwaye eqinisweni, abaqeshwa kwiindawo ezahlukeneyo ze-UAE. Ngendlela efanayo, le nkampani iqalisa ukusebenza kwi-UAE ukususela kwi-2004. Charterhouse inezikhundla ezifumanekayo kubantu abaphumayo abakhangayo umsebenzi wabo wokuqala okanye wesibili e-Dubai. Kwelinye icala, uninzi lweendima zabo zezokufumana iingcali ezinolwazi kunakwizikhundla ezilula. Benza nengcali kwezolawulo oluphezulu ukugaywa kwemisebenzi ye-niche kunye nemisebenzi yobunjineli.
Michael Page - Imisebenzi e-Dubai indawo e-UAE
N0.5 uMichael Page
Ngexesha elifanayo, inkampani kaMichael Page ihlabathi jikelele intlangano yokuqesha. Njengombandela, le nkampani imiselwe ngokuqinileyo kwimarike yeDubai City. Ngenxa yoko, baneeofisi emhlabeni wonke. Nangona oku kunokuba yinyani iMichael Page kubandakanya amazwe ahamba phambili kunye nezixeko ukulungiselela ukugaya. NjengaseJapan kunye neIreland neOstreliya. Ukongeza, banokubeka u uluhlu lwezikhundla ukusuka ekuqeshweni ukuya kwinqanaba lomlawuli webhodi kwi-Emirates Airlines.
Imisebenzi e Dubai - Yiba yedwa kwaye ufumane umsebenzi omtsha!
Ngaphezu koko, ukuba unomdla wokuhlala e-UAE, kunjalo eyona ndlela ikhethekileyo kubo bonke abavela ngaphandle ukugxila kubuchule babo bendawo. Okubandakanya iinkonzo zezezimali, icandelo eliphakathi lolawulo kwindima yokuthengisa kunye nentengiso ngaphakathi Emirates. Ungasathethi ke ngezifundo zobuchwephesha kwezothutho, ukuvelisa kunye amashishini okwakha kunye namanxweme.
Ngoku sisebenzela iinkampani zikaRhulumente
Imisebenzi e-Dubai Ukuqeshiswa kwezibonelelo
Iinkampani zikaRhulumente kwi-UAE kufuneka zihlolwe
Iinkampani zikaRhulumente zaye zaseka iinkampani ezilungileyo kakhulu e-Abu Dhabi nase Dubai City kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Ngapha koko, bakwanayo ukunwebelwa kuwo onke amazwe e-GCC kunye nokwenza amashishini ngakumbi apho. Uninzi lwemisebenzi ebhengeziweyo isuselwa kwi-capitals efana ne-Doha, Dubai, kunye Riyadh. Ngoko ke bankulu kumashishini amashishini kwaye zibaluleke kakhulu kwi-UAE. Ngoko ke ukuba uyingcali yokufumana umsebenzi wehotele okanye uchwepheshe wobunjineli obulawulayo kwioyile nakwirhasi. Ngapha koko, ulwakhiwo, ubunjineli, iibhanki, IT okanye amashishini okuthengisa. Kufuneke u qala ukufuna umsebenzi apho. Ezi nkampani zimangalisayo kufanelekile ukuzama.
I-Expo 2020 Career e Dubai
Expo 2020 ekukhanyeni kokukhula kwe-UAE. Imarike yomsebenzi kunye nophuhliso kwiDubai City. Njengokuba ngenyaniso, Kuya kufuneka uphonononge i-Middle East imakethi yomsebenzi kunye Expo 2020 yenye yeendlela ezilungileyo zokwenza. Kwelinye icala, unokuba yinxalenye ye Expo 2020 Dubai Uhambo lomsebenzi lungabonwa uluhlu olubanzi lwezengqesho kunye namathuba okuzithandela.
Umsebenzi kwi-Expo uyatholakala kubantu abangabalulekanga kunye nabafundi abaphuma ngaphandle. Ukubeka ngenye indlela, ukuba ujonge ukujoyina iqela le-Expo 2020 HR kufuneka ube ngumntu onamandla, kukhuthazwe kakhulu isikhundla esitsha kwaye waphefumlela umntu kwiqela lakho elitsha.
UMphathiswa weNkonzo yangaphakathi
Kukho i-1,000 Mphathiswa we Ngaphakathi Imisebenzi e Dubai ngenxa yakho kwi-2018. Ingaba ungumfundi wezinga lokungena? Okanye ufuna i-career ephezulu? Ubulungiseleli be-Interior ngenye yezona zinto zilungileyo. Ngokubanzi, kunezithuba zezithuba ze-1,200 eziza kuzaliswa ngamasebe ahlukeneyo ngaphakathi kwiDolophu yaseDaibha. Kwaye ezininzi zazo zihlawulwa kakuhle candelo lo msebenzi. Faka isicelo apha ukuba ufuna ukusebenzela Imisebenzi kaRhulumente kwi IUnited Arab Emirates. Layisha Qhuba yakhoYongeza ukuqala kwakho kolu shishino. Ke ngoku Fumana ngakumbi malunga nokuchitha ixesha lakho kwisiXeko saseDubai.
ISebe loLuntu loLuntu lwaseDaibha elifuna wena.
Urhulumente wase Dubai KwiCandelo Lobasebenzi Kule meko, injongo yeli thuba vumela ii-expats zibe ngumntu obekwe kakuhle eDubai. Umasipala ubeka phambili ukhetho lwakho lokuzibandakanya nosapho ishishini kwaye eyona ndlela yokuzibandakanya nabo kukwazi iinjongo ezisisiseko ngayo Iimilinganiselo yenziwe nguRhulumente waseDubai. Bambalwa kuphela ekufuneka uyazi "Ukuphendula, ukhuphiswano, Ukwenziwa kwezinto ezintsha, ukuTyhilwa, kunye nolonwabo".
Imisebenzi enxulumene noRhulumente kufuneka ubencinise ubuncinci. Umzekelo, kufuneka ufumane Imfundo ye-MBA yezithuba zengcali.
ImiSebenzi yeqela leTECOM
Iqela leTECOM inikeza uluhlu lwamathuba engqesho kwi Dubai City, kwaye le nkampani sisivumelwano esikhulu nje. Ngenjongo yokufumana abagqatswa abatsha kubantu abafanelekileyo ukuya kwizidanga ezintsha. Iqela le-Tecom liqasha ii-expats kunye nabafuna umsebenzi wasekhaya ngobuchule obumiselweyo. Umgqatswa onesidanga kunye neempawu zakhe banokufumana lula umsebenzi nabo.
Iqela leTecom lisebenzisa iphuli yeetalente zenkcubeko ezahlukeneyo ezivela eIndiya, eUS, Khanada, EOstreliya nakuMbindi Mpuma. Ukubeka ngenye indlela, inkampani yenza ukuba abantu abafuna umsebenzi bafumane umsebenzi ukucinga ngokwahlukileyo ngenkcubeko yaseDubai kunye neenkonzo. Kwiminyaka yokugqibela ye-20, inkampani inika ukhuphiswano inzuzo kuwo wonke umzingeli wemisebenzi. Ngokuthathela ingqalelo indawo yemarike ekhula jikelele eDubai. Ikhampani yenza utyalomali olunempumelelo kakhulu kumazwe e-GCC kunye neenkampani ezimangalisayo kwaye uya kuba umlawuli ukuba ungumntu ofanelekileyo.
Ngesi sizathu, Iqela le-TECOM kwi2018-2019 lenze utyalomali lwexesha elide. Ngokubanzi, inani lezikhundla ezikhoyo ngaphakathi kwenkampani zilungele ukuzaliswa. Oku kwaziwa kakuhle Isixeko saseDubai sisebenzisa imisebenzi eyahlukeneyo kunye nokukhutshwa kuwo onke amanqanaba e-Dubai. Ukushwankathela kufanele ukuba uthumele ikharityhulamuyakho ehlaziyiweyo ukuze uqwalaselwe ukuvulwa kweQela leTecom, nceda Tyelela i-Dubai Careing Career ukulayisha iinkcukacha.
Imisebenzi e-Dubai Ukuqashwa kunye ne-Dubai City Inkampani. Eyona nkampani ibhetele kunabo bonke abafuna umsebenzi!
Imisebenzi e Dubai nge Dubai Holding
Ukunikezelwa kwezi ngongoma, sebenzisa ngqo Dubai Holding kwaye ufumane i- "Gov" uYob no-Dubai Holding. Umele uthumele i-Resume yakho kwi-Intanethi kwi-Dubai City Holding. Kuze kube ngoku, kunjalo Iyona nkampani efanelekileyo yokusebenzela kwiiGulf Countries. Okwangoku, unokuseta izilumkiso ezivela kwinkampani yabo. Ekugqibeleni, fumana isicelo somsebenzi kunye nemibuzo evela kubaqeshi eDubai. Ukufikelela kwabaqashi bakaRhulumente ngqo eDubai. Ungalayisha kwakhona kwi-UAE kumaphepha orhulumente.
Wamkelekile kwi-Dubai Holding Group - Dubai Holding Imisebenzi e-Dubai Ukuqashwa kunye ne-Dubai City Inkampani.
Ngoku unokufaka isicelo semisebenzi e-Dubai Holding. Abaphathi balapho banamathuba amaninzi emfundo kunye neepotifoliyo zeenkampani ezigxilwe kwiindawo zoshishino, izibhedlele, ezokuvakasha, indawo yokuhlala kunye ne-telecommunications kunye ekufundiseni i-career echaphazelekayo.
I-Dubai Holding okoko i-2009 idlale indima ebalulekileyo ekwahlukaniseni umsebenzi kunye noqoqosho lwemisebenzi kumashishini amaninzi. Ngokudibeneyo, iinkampani zimele ukubandakanyeka kumashishini onke e-12, ziqhubela phambili ukuxhasa kunye nokukhula kozinzo, ukuvelisa okukhokelwayo kuqoqosho olutsha ngokuhambelana noMbono we-United Arab Emirates we-2021.
Ukuba nguwe umviwa welizwe lonke kwaye ufuna umsebenzi enika ithuba lokusebenza kunye nemveliso yamazwe ngamazwe, uqeqesho olubanzi nophuhliso lwase Dubai Umsebenzi wokuthengisa uyenawe. Qala umsebenzi wakho omtsha kwaye ube yinxalenye ye okusingqongileyo okukhawulezayo kunye nomngeni kwiDubai City. Thumela i-Resume yakho ukuya eDubai Holding.
Ngoku sifunela eDubai!
Inye into ekufuneka uyikhumbule yile IDubai inezinga eliphantsi kakhulu lolwaphulo-mthetho. Ke, unale nto engqondweni, Ngaba uyafuna ukufumana a UYobhi e Dubai nangona oku kunokuba yinyani sinako ukukunceda nokuba uselula. Uqala umsebenzi omtsha kwiThe UAE!
Layisha kwakhona kwiSixeko esakhawulezayo esakhulayo emhlabeni! - Dubai City
Inkampani yaseDubai City ngoku inikezela ngokulungileyo guides Imisebenzi eDubai. Iqela lethu lagqiba ukongeza ulwazi kulwimi ngalunye kolwethu Dubai idlulisa. Ngoko, ngale ngqondweni, unokufumana izikhokelo, iingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates kunye nolwimi lwakho.